China Summer One Strap ချစ်စရာအပြုံးမျက်နှာ အမျိုးသမီးများအတွက် Cloud Cushion Slides ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |JNP
စိတ်ကြိုက် Unisex Garden Clog နွေရာသီရေချိုးခန်းကမ်းခြေ EVA ...
Unisex Soft Comfy Indoor Bathroom Sandals Cloud EVA ...
စိတ်ကြိုက်အမျိုးသမီး ကြက်ခြေခတ်တီးဝိုင်း Sheepskin ဖိနပ်
စိတ်တိုင်းကျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ထူထဲသော Memory Foam Indoor Coz...
လူကြိုက်များသော သက်တောင့်သက်သာရှိသော အမျိုးသမီး သိုးသားရေပြားဆလိုက်ဖိနပ်
အမျိုးသမီးများ ပျော့ပျောင်းသော မိုးလုံလေလုံ Vegan သားမွေးဖိနပ်များ စိတ်ကြိုက်လိုဂို
ဆောင်းရာသီအနွေးထည်အမျိုးသမီး Shearling Scuff ဖိနပ်
နွေရာသီ One Strap ချစ်စရာအပြုံးမျက်နှာ အမျိုးသမီးများအတွက် Cloud Cushion Slides
* ထူးခြားသော တိမ်ပုံသဏ္ဍာန် ဒီဇိုင်း၊ ပြုံးနေသော မျက်နှာနှင့် အလွန်ချစ်စရာကောင်းသည်။
* နူးညံ့ပြီး ကျန်းမာသော EVA ပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ လမ်းချော်ပြီး ရေစိုခံခြင်း။
* အလုံးစုံ တိမ်ပုံသဏ္ဍာန် ဖိနပ်တစ်ရံသည် ပြီးပြည့်စုံသော လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
* နွေရာသီအရောင်များစွာ၊ ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုများ
ရိုးရှင်းသော မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် မတူညီသောအရောင်များ
နွေရာသီ ချစ်စရာ Cloud Design EVA ဖိနပ်များ
ဒါက အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ တိမ်ပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာဖိနပ်တစ်ရံပါ၊ တစ်ကိုယ်လုံးက တိမ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး တိမ်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ကောင်မလေးအတွက် လက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ တိမ်တိုက်ဖိနပ်တစ်ရံက သာမန်ဖိနပ်တစ်ရံထက် နှစ်ဆလောက်ထူနေသေးပါတယ်။ အရမ်းစတိုင်ကျတဲ့ နွေရာသီအောက်ခံဖိနပ်တစ်ရံ၊ တိမ်တွေထဲမှာ လမ်းလျှောက်ရသလို ပျော့ပျောင်းစွာဝတ်ဆင်ပါ။
ဖိနပ်တစ်ရံသည် အလွန်ပေါ့ပါးပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော အရည်အသွေးမြင့် EVA ကို အသုံးပြုထားသည်။ EVA ပစ္စည်းသည် ပျော့ပြောင်း၊ ခြောက်သွေ့လွယ်၊ ပေါ့ပါးပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောကြောင့် နေ့စဥ်ဝတ်ဆင်ရ အဆင်ပြေစေပါသည်။ ပရီမီယံ EVA သည် ဤတစ်စုံကို ကောင်းမွန်သော elasticity ပေးပါသည်။ ပစ္စည်းများသည် ပေါ့ပါးပါသည်။ တာရှည်ခံ၊ ကွေးညွှတ်ပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး သန့်ရှင်းရန် လွယ်ကူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖိနပ်တစ်ရံကို ပေးသွင်းပြီး နှစ်စဉ် အမြောက်အမြား တင်ပို့ရောင်းချသော ဖိနပ်တစ်ရံဖြစ်ပါသည်။ ရရှိနိုင်သော စတိုင်များစွာရှိပါသည်။ နွေရာသီခြေညှပ်ဖိနပ်များ၊ နွေဦးသားမွေးဖိနပ်များ၊ ဆောင်းဦးဆံပင်ညှပ်ဖိနပ်များ၊ ဆောင်းရာသီ အနွေးဖိနပ်တစ်ရံ၊ များစွာသော ပေါင်းစပ်မှုများနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းကို လက်ခံပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပြီး သုံးစွဲသူများစွာအတွက် ၎င်းတို့၏စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ရင့်ကျက်သောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရဲရင့်သောရွေးချယ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အားကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်ဟု သင်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
1. စိတ်ကြိုက်လိုဂို : Insole၊ Outsole၊ Upper စသည်တို့
2. စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများ-သိုးသားရေ၊ သိုးမွှေးအတု၊
3. စိတ်ကြိုက်အရောင်များ- ပန်းရောင်၊ အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင် စသဖြင့်
4. စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားများ- မတူညီသောအရွယ်အစားများ၊ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်အရွယ်အစားများ
5. စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးခြင်း- ဖိနပ်သေတ္တာ၊ ပလပ်စတစ်အိတ်စသည်ဖြင့်၊ စိတ်ကြိုက် Logo ထုပ်ပိုးမှုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက်အကြံဥာဏ်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ သို့မဟုတ် Amanda@jnpfootwear.com သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။
6 နာရီအတွင်း သင့်ထံ စာပြန်ပါမည်၊ စိတ်ရှည်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံ အမြန်ဆုံး အကြောင်းပြန်ပါမည်။
ယခင်- စိတ်ကြိုက်အမျိုးသမီးဖက်ရှင်ပိတ်ခြေချောင်းအတုယူ Mink Fur Birken ဖိနပ်
နောက်တစ်ခု: Unisex Summer Indoor Bathroom Bubble Sandals ဖိနပ်
Classic Real Sheepskin Fur Ankle နှင်းဖိနပ်
စိတ်ကြိုက် Fluffy Indoor Closed Toe Real Sheepskin...
Indoor Outdoor အတွက် Fluffy Cozy Lamb Fur Slippers...
အမျိုးသားများအတွက် ဆောင်းရာသီ Soft Memory Foam အတွင်းပိုင်းဖိနပ်
စိတ်ကြိုက် Indoor Cow Suede အစစ်အမှန် Sheepskin ဖိနပ်များ...
လက်ကားအမျိုးသမီးများ Big Fur နှစ်ထပ် Strap ဖိနပ်